Sandals iyo Xeebta Nasashada waxay ku guulaysteen 13 Abaalmarinno Majaladda Quusidda Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Sandals iyo Xeebta Nasashada waxay ku guulaysteen 13 Abaalmarinno Majaladda Quusidda Cusub
Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • Wararka Saint Lucia • Sports • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Sandals iyo Xeebuhu waxay ku guulaystaan ​​abaal-marinnada quusitaanka
Goobaha Dalxiiska ee Sandals iyo Xeebuhu waxay sii wadaan inay dejiyaan heerka ugu sarreeya ee dhammaan goobaha quusitaanka ee Kariibiyaanka ah.
Waxay ku dhawaaqeen abaal-marintoodii ugu dambaysay Quusitaanka Scuba Magazine-ka Abaalmarinta Xulashada Akhristayaasha 2022 Kariibiyaanka.
Sannad kasta, Quusitaanka Scuba Akhristayaasha joornaalku waxay qiimeeyaan meelaha loo dalxiis tago ee aduunka oo dhan waxayna tixgeliyaan noocyo kala duwan.
Qaybahani waxay u dhexeeyaan tayada qolalka iyo makhaayadaha ilaa tayada shaqaalaha, waayo-aragnimada qoyska ee ugu fiican, iyo in ka badan.
Isu geyn 13 abaal-marinno ah waxaa ku guuleystay summada Luxury Included®:
#1- Waaya-aragnimada Saaxiibtinimo ee Qoyska ugu Fiican- Goobaha Xeebta
#1 - Tayada qolalka- Sandals Grande St. Lucian
#2 - Tayada qolalka- Sandals Grenada Resort and Spa
#2 - Tayada makhaayadda- Sandals Grande St. Lucian
#3 - Tayada Dalxiiska- Sandals Grande St. Lucian
#3 - Tayada makhaayadda- Sandals Grenada Resort and Spa
# 5 - Tayada Dalxiiska -Sandals Grenada Resort iyo Spa
#10 - Tayada qolalka- Sandals Negril
#10 - Tayada Shaqaalaha- Sandals Grande St. Lucian
#10 - Tayada qolalka- Sandals Montego Bay
#15- Guud ahaan ugu Fiican- Sandals Grande St. Lucian
#15 - Tayada Dalxiiska- Sandals Ochi Beach Resort
Tan iyo bilawgii wadashaqayntooda 1997, PADI® waxay kaalinta Sandals Resorts iyo Beaches Resorts ka dhigtay mid ka mid ah 5-ta hawlgal ee quusinta ugu sarreeya ee Hemisphere Galbeed. Shirkadda dalxiiska ee Luxury Included® waxay bixisaa khabiir ku ah shahaadada PADI training iyo tababar martida ku sii jirta goobta nasashada oo ay siisay ku dhawaad ​​140,000 oo shahaadooyin PADI ah ilaa maanta. Shahaadooyinka laga heli karo muddada dalxiiska ee laga soo bilaabo shahaadada PADI Open-water shahaado ilaa jidka shahaado macalinka shaqaalaha PADI IDC iyo koorsooyin khaas ah oo aan tiro lahayn oo u dhexeeya. Oo ay ku jiraan koorsada takhasuska ah ee Lionfish Hunter PADI, halkaas oo martida meelaha loo tamashlaha tago ay baran doonaan sida saxda ah ee loo ugaarsado noocyada duullaanka ee Kariibiyaanka oo ay u kariyaan soo qabashadooda.
Markaad joogtid mid ka mid ah meelaha shirkadaha dalxiiska ee Kariibiyaanka oo dhan, quusayaal shahaado haysta ayaa quusi ​​kara maalin kasta waxaana laga soo rari karaa jaranjarooyinka qolkooda si ay u noqdaan goobo qalaad oo ku faanta reefs midab leh, burburka maraakiibta firfircoon, hoos u dhaca, iyo noocyo badan oo noocyada biyaha hoostooda ah. Iyadoo Sandals Resorts iyo Xeebta Dalxiiska Aquacenters ay bixiyaan qalabka ugu sarreeya oo leh wax kasta oo ka socda Scuba Pro® regulators iyo BCD's, waji-xidhka, snorkels, Deep Blue Fins® iyo taangiyada casriga ah, doomaha naaftada mataanaha ah ee Newton, quusayaasha waxay ku raaxaysan karaan waayo-aragnimada biyaha hoostooda ee aan la barbar dhigi karin, dhamaantood waxaa ku jira. Si kor loogu qaado barnaamijka quusitaanka ballaaran, martidu waxay dhawaan awood u yeelan doonaan inay sahamiyaan biyaha caanka ah ee adduunka ee Curaçao ee Sandals Resorts' meesha ugu cusub ee quusitaanka, Sandals Royal Curacao, laga bilaabo Abriil 2022.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan goobaha dalxiiska ee abaal-marin ama si aad u ballansato joogitaankaaga soo socda, fadlan booqo: sandals.com iyo xeebaha.com.